Bit By Bit - Nzuzo na Nkwenye Policy
Nzuzo na Nkwenye Policy
On a website, anyị na-eme zuru ederede nke Bit site Bit: Social Research na Digital Age dị ọ na-eri. Mgbe ị na-agụ akwụkwọ, anyị na-atụ agụ omume na rụpụta mkpokọta nchịkọta. Dị ka ihe atụ, anyị ji atụ nke ngalaba nke akwụkwọ ina-agụ ọtụtụ mgbe. Nke a data ga-enyere anyị mma akwụkwọ. Anyị na-agba ọsọ nwere-akpọkarị A / B ule -in iji nyere anyị aka ere ihe bụ mkpụrụ. Ihe niile anyị na-eme bụ ọsọ on oge a na weebụsaịtị. Anyị na-akọwa ya n'uju n'okpuru, anyị ga-atụ ihe ndị anyị mere na ihe ndị anyị mụtara na anyị blog .
Ihe ọmụma ka anyị na-anakọta?
Anyị na-eji Google Analytics na-anakọta ozi gbasara otu i si enwe mmekọrịta na a website. Ọzọkwa, dị ka ọtụtụ nrụọrụ weebụ, na anyị na-eji kuki aka gị na ahụmahụ, kpọkọta n'ozuzu esenowo ọmụma, na soro na-eleta ndị anyị website. Biko rụtụ aka na "anyị iji kuki?" ngalaba dị n'okpuru maka ozi gbasara kuki na otu anyị si eji ha.
Ihe ọ bụla nke ozi na anyị na-anakọta mee ihe nnyocha, ka mma akwụkwọ, na-enyere ere akwụkwọ.
Anyị mejuputa a dịgasị iche iche nke nchebe ịnọgide na-enwe nchekwa nke ozi ị na-enye anyị.
Ọtụtụ n'ime ndị nchọgharị ọmụma na anyị na-echekwa Google Analytics , na i nwere ike ịgụ ihe banyere ha nche na nzuzo ụkpụrụ .
Annotations na ị na tinye-jisiri site hypothes.is , na i nwere ike ịgụ ihe banyere ha usoro nke ọrụ .
Anyị website na-kwadoro site Github Pages , na i nwere ike ịgụ ihe banyere Github si usoro nke ọrụ .
Ka anyị na-ejikwa kuki?
Ee. Cookies bụ obere faịlụ na a na saịtị ma ọ bụ ya na-eweta ọrụ na-enyefe gị na kọmputa na-ike mbanye site nchọgharị weebụ gị (ma ọ bụrụ na ị na-ekwe) na-enyere ndị saịtị ma ọ bụ ndị na enye ọrụ na usoro na-aghọta ihe nchọgharị gị na kpọọ na-echeta ụfọdụ ozi.
Iji na-enye gị a mma saịtị ahụmahụ, anyị na-eji kuki iji ghọta ma zọpụta mmasị gị ga-eme n'ọdịnihu nleta na ikpokọta nchịkọta data banyere saịtị okporo ụzọ.
Anyị na-adịghị ere, azụmahịa, ma ọ bụ n'ụzọ nyefee n'èzí ọzọ gị chọpụta mmadụ ma e wezụga tụkwasịrị obi nke atọ bụ ndị nyere aka na-arụ ọrụ anyị website,-eduzi nnyocha, ma ọ bụ na-enye a ọrụ gị, ka oge ra ndị ọzọ ekweta idebe ozi a nzuzo . Anyị nwekwara ike hapụ gị ozi mgbe anyị kwere ntọhapụ kwesịrị ekwesị soro n'iwu, manye anyị na saịtị atumatu, ma ọ bụ chebe anyị ma ọ bụ ndị ruuru ndị ọzọ, ihe onwunwe, ma ọ bụ nchekwa.
Nke atọ bụ na njikọ
Mgbe ụfọdụ, anyị uche, ka anyị nwere ike ịgụnye njikọ nke atọ weebụsaịtị. Ndị a atọ ọzọ saịtị nwere dị iche iche na onwe ha nzuzo atumatu. Anyị mere, nwere ibu ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ibu n'ihi na ọdịnaya na-eme nke a jikọtara saịtị. Ka o sina dị, anyị na-achọ iji chebe ike n'ezi ihe nke anyị na saịtị na-anabata ihe ọ bụla nzaghachi banyere saịtị ndị a.
weebụsaịtị Bochum na-
Site na iji anyị na saịtị, ị kwenye na anyị na iwu nzuzo.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko eziga anyị ihe email info@bitbybitbook.com .
Mgbanwe anyị Nzuzo na Nkwenye Policy
Anyị na-doputa ikike ịgbanwe anyị iwu nzuzo site n'oge ruo n'oge na anyị naanị ezi uche. Biko ini ke ini ịlele nkebi a iji nyochaa ugbu a version nke Privacy na Nkwenye Policy. All anyị gara aga atumatu na-ọkọnọ n'okpuru, na anyị ga-anọgide imelite peeji a ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla mgbanwe na-mkpa.